Ukukhokela i-GPS yokuKhangela abaNtluntwini kwiDementia | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Abantu abadala banokufumana iingxaki zempilo, ezinxulumene nembono, iindlebe kunye nokulahleka kwengqondo. Ezi zifo zinokubangela iingxaki ezinkulu okanye ungaphulukana nesihlobo. Kwezi ndidi zeemeko, umkhondo we-GPS wabadala sele wenziwe; isixhobo esivumela indawo yokufumana abantu.
Zizixhobo ezilungiselelwe ngokukodwa abantu abadala kunye nabadala, ngamaqhosha amakhulu, ukusetyenziswa ngokulula, kunye nokusebenza okulula. Inkqubo yokulandela umkhondo kwiimeko ezahlukeneyo, esekwe kumakhadi e-SIM okanye kwiinethiwekhi ze-GPS, ngaphandle nangokunxibelelana kwelizwi kunye nendlela ezizimeleyo ezahluka ukusuka kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiinyanga ezininzi.
Izifundo ezininzi zithi i-60% yezigulana zeAlzheimer ishiya amakhaya abo ngaphandle kwabakhathaleli (abantwana, abongikazi, njl njl). Isininzi sizulazula iiyure. Isigulana siyachithakala kuba siphila kwixesha elidlulileyo apho kungekho zinkumbulo zangoku. Izitrato, kulungelelwaniso lwazo lwangoku, ziindawo ezingaqhelekanga ongazaziyo.
Kwezi meko, kuyacetyiswa ukuba nobuchwepheshe obuvumela ukuba kuthathwe amanyathelo ngokukhawuleza, njengendawo yokufumana indawo yabantu abadala, abantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo okanye i-Alzheimer's. Ngale ndlela, siya kuziphepha iimeko zoxinzelelo kungekuphela nje kuthi kodwa nakwabakhulileyo, abanokuthi bangakwazi ukulawula ngendlela efanelekileyo ukunqongophala kwengxaki yabo kwaye bayandisa ingxaki. Uninzi lwexesha xa kungenasiphelo esonwabisayo, umntu omdala ungaphantsi kwe-4 km ukusuka endlwini yakhe.
Indawo ye-GPS yabantu abadala abanesifo sengqondo esixhalabisayo okanye i-Alzheimer's iyawunciphisa umngcipheko wokufika kwindawo yesidlangalala ngokukhawuleza xa ulahlekelwe.
Indawo inokuboniswa kwifowuni ephathekayo, ithebhulethi okanye ikhompyuter eqhagamshelwe kwi-Intanethi.
Ngaphambi kokufumana indawo yokuba ngumdala, qiniseka ukuba iyahlangabezana neemfuno zakho. Iindlela ezininzi zoqoqosho zisebenzisa ubuchwephesha obunokuthi bungabi luncedo kwiimeko ezithile, ezinjengeendawo zeBluetooth.
Kutheni le nto kufanelekile ukusebenzisa indawo ye-GPS yabantu abadala?
Xa umntu kusapho lwethu enokulahleka, abe neengxaki zememori, isifo sengqondo esixineneyo, isifo sengqondo esixhalabisayo, okanye esinye isigulo, indawo eyi-GPS iyinto ekuthengwa okusinika uxolo lwengqondo.
Ukufumana abantu bethu esibathandayo behlala bekhona ngalo lonke ixesha kunokuba lolona khetho lufanelekileyo kumatyala apho ixesha lingasivumeli ukuba siqhubeke nokubukela umntu. Ngalezi ndawo, singasusa amaxhala, sisazi ngalo lonke ixesha ukuba umntu lowo uyithwele ngubani.
Apha ngezantsi sinika iinkcukacha zemisebenzi ephambili yendawo eyi-GPS:
Isixhobo okanye iqhosha elithi "SOS".
Ubukho bekhadi le-SIM (ngaphandle konxibelelwano nesatellite, kubonelela ngonxibelelwano lwe-GSM).
Ukukhusela kwimozulu embi yesixhobo.
Isivumela ukulandelela intshukumo yomsebenzisi kwimephu, kunye nokugcina uqhagamshelo kude.
Iindidi zegajethi esinokuzifumana
Isikhombisi se-GPS sinokwakheka njengesongo okanye isongo, ipendant, iwashi, ifowuni okanye isixhobo esikhethekileyo esinokuhanjiswa.
Indawo yefowuni: Ezi ntlobo zeefowuni zixhotywe ngamaqhosha amakhulu kunye nebhetri enamandla kunye neyomeleleyo. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba unokukhanya kunye "noncedo" (SOS) ukusebenza ngamaqhosha oomatshini, ukulungiselela ukufikelela kwabadala. Bakuvumela ngokubanzi ukuba wamkele okanye ubenqabe umnxeba kwisenzo.
Iwristwatch enendawo yeGPS: inomnxeba owakhelwe-ngaphakathi, iqhosha elithi "SOS", kwaye ezinye iimodeli zinesisixhobo sokukhupha i-wrist (ke siyazi ukuba umsebenzisi uhlala enxibe iwashi okanye hayi.).
Uninzi lweemodeli ziza zixhotywe ngenzwa yokulinganisa i-pulse kwaye ibone ukuhla okubukhali.
Indawo yesenzi yenye yezona zinto zincinci kwaye zilula. Ineqhosha lokuhlangula, imodyuli ye-GPS yokufumana indawo kunye nesisixhobo sokulahla esibonisa indawo yomzimba kwaye ngokuzenzekelayo sithumele isignali engxamisekileyo kumkhathaleli okanye umntu onoxanduva.
Isixhobo esiphathwayo: ifaka iqhosha lovavanyo olungxamisekileyo kunye nesigqubuthelo sokuphepha amanzi kunye nobumdaka, njengothuli. Inebhetri enamandla kakhulu kwaye ibhetri xa iphelile yazisa umfundisi ngeSMS.
Yintoni kwaye isebenza njani indawo indawo ye-GPS elungiselelwe umntu okhulileyo?
Ukusebenza kwesi sixhobo kulula. Isixhobo sifumana idatha ngonxibelelwano kunye neesatellite malunga nendawo yomsebenzisi, ngoko ke uluhlu alunqunyelwe. Ngoncedo lweSIM khadi efakiweyo, indawo leyo idluliselwa kumalungu osapho.
Isaziso esineenkcukacha zomntu osele ekhulile singenzeka ngoku:
Ukuba kufuneka sazi eyona ndawo akuyo umsebenzisi, kufuneka sithumele umyalezo omfutshane kwi-SIM khadi efakwe kwi-tracker.
Esi sixhobo siya kuthumela umyalezo kwimpendulo yosapho kunye nedatha eyiyo ye-GEO kunye nekhonkco kwimephu (kuGoogle) kwindawo yokumakisha apho ibekwe khona.
Olu hlobo lwesilumkiso luyindlela enoqoqosho kakhulu ngokubhekiselele ekusebenziseni amandla, oko kukuthi, umkhondo we-GPS usebenza kule ndlela usebenzisa ifowuni eqhelekileyo, ngenxa yoko akuyomfuneko ukusebenzisa i-smartphone.
Inkqubo yokubeka iliso ehambelana ne-GPS
Abanakekeli banokulandela umntu osekhulile esebenzisa ikhompyuter, i-smartphone okanye i-tablet isicelo. Ingenziwa kuzo zonke izixhobo ngexesha elinye.
Babonakaliswa kukusebenzisa kwabo amandla aphezulu, kufuneka nokuba sinonxibelelwano lwe-Intanethi kwi-SIM khadi efakwe kwisixhobo sokulandela umkhondo. Singahlala siqhuba lonke useto sikude usebenzisa imiyalelo ye-SMS.
Yintoni endifanele ndikhangele kuyo xa ukhetha indawo ye-GPS yabantu abadala?
Ngokuyintloko, ezi zixhobo zihlukile ngohlobo. Into ebalulekileyo ekufuneka siyithathele ingqalelo ngumthamo (ex: ubude) bebhetri yesixhobo. Ezinye izinto ekufuneka sizixabisile zizinto ezenziwe. Umzekelo, ezona zixhobo zixabisekileyo ziye zingasebenzisi amandla kwaye zisebenza ngokukhawuleza nangokuchanekileyo ngakumbi.
Ezinye izinto esinokuthi sizivavanye ziimpawu ezongeziweyo ezifana ne-sensor ye-sensor okanye umatshini wokuthintela umlinganiso, oya kuthi, kwimeko yotshintsho olubukhali kwindawo yendawo, iya kwaziswa ngeSMS engxamisekileyo. Ityala lokungahambeli kwamanzi kukhetho olufanelekileyo, lusebenza njengokhuseleko kwiimeko ezimbi zemozulu.
Kweminye imodeli ye-GPS, sinokusebenzisa i-perimeter ye-GEO (ukubiyela) ukuseka umda womda, xa ushiya indawo ephawulweyo umkhombisi uya kuthumela umyalezo wesilumkiso.
Ezinye izinto ezibalulekileyo omele uzikhumbule
Xa ibhetri ikufuphi ekuphelisweni kwaso isixhobo siya kwazisa umsebenzisi.
Esi sixhobo ayisoselfowuni, ngoko ayichaphazeli kakubi umntu oyisebenzisayo.
Ungabona ezinye iindidi zeendawo ezafunyanwa kubantu abadala kwizigaba ezahlukeneyo.
4551 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-22 Namhlanje
Owona mlandeli weGPS uphambili kwizigulana eziva ubunzima ...